Wakii Hore War Soo Dhaaf!! - Jadon Sancho Oo Dhaafsan Kooxda U Waalanaysa Ee Man United & Kooxda Premier League Ee Uu Jeclaan Lahaa - Gool24.Net
Wakii Hore War Soo Dhaaf!! – Jadon Sancho Oo Dhaafsan Kooxda U Waalanaysa Ee Man United & Kooxda Premier League Ee Uu Jeclaan Lahaa
Mustaqbalka iyo wararka suuqa ee la xidhiidha da’yarka kooxda Borussia Dortmund ee Jadon Sancho ayaa u muuqda mid waji cusub yeelanaya iyadoo ay soo baxeen warar sheegaya in xiddigu uu isha ku hayo kooxda dhawaan Premier League kusoo guuleysatay ee Liverpool.
Man United ayaa la sheegayaa inay wadahadalada la bilawday dhigooda Dortmund iyagoo bar-tilmaameedsanaya inay dalab 100 Milyan oo Pound ah miiska u saaraan kooxda ree Germany.
Kaddib markii uu xilli ciyaareedkan 20 gool iyo 20 caawimo soo sameeyay tartamada oo dhan, waxa uu shaki ku jiraa in kooxda uu hoggaanka u yahay tababare Ole Gunnar Solskjaer ay si sahlan ku heli doonto.
Warka weyn ee hadda soo yeedhay ee sheegaya inuu ka ciyaarista Anfield door bidi lahaa Jadon Sancho ayaa ah mid kasoo yeedhay khabiirka kubadda cagta Germany ee Aage Fjortoft.
Aage oo aragtidaas ku qoraya barta Twitter-ka ayaa yidhi “Majalada ree Germany ee Kicker waxa ay maanta qortay inay Germany ka jirto xan ah inuu Jadon Sancho doorbidi lahaa inuu Liverpool tago halkii uu Man United ka tagi lahaa”
Liverpool ayaa dhawaan kusoo guuleysatay horyaalkeedii ugu horreeyay ee Premier League ah kaddib 99 dhibcood oo ay xilli ciyaareedkan soo heleen.
Dhibcahaas ayaa ka dhigaya kuwo 36 dhibcood ka sarreeya Man United oo booska saddexaad kaga dhammaysatay kala sarreynta isla markaana ahayd mid 15 kulan guuldarro la’aan ah kulamada horyaalka ilaa bishii January.
Sababta ugu weyn ee uu Sancho uga carari karo heshiis uu Man United ugu biiro ayaa ah inuu cabsi ka qabo inay awoodi waayaan inay Premier League ku guuleystaan.